Maamule hore ee dugsi oo xukun 4,5 xabsi ah lagu ridey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dugsiga Al-Azhar ee xaafadda Vällingby. sawir: Pontus Lundahl/TT
Maamule hore ee dugsi oo xukun 4,5 xabsi ah lagu ridey
La daabacay torsdag 27 juni 2019 kl 13.21
Afar ka mid ah xubnihii hore ee ururka samafalka iskuullada Al-Azhar oo lagu ridey xukun la xiriira dembi culus ee dhaqaale. Halka aasaasihii ururka lagu xukumey 4 sannadood iyo 6 bilood oo xarig ah.
Hoggaankii hore ee ururka samafalka shirkadda iskuullada ayaa lagu tuhunsanaa inuu 11 malyan oo koron ka qaaday khasnadda ururka, middaasina oo looga dan lahaa qorshe bangi lagu furo.
Iyadoona aasaasihii lagu ridey xukun gaarsiisan afar sannadood iyo bar sannadood oo xarig ah markii lagu soo eedeeyey khiyaano culus oo loo geeystay masuulka, dembi culus ee xisaab xir iyo sidoo kale dembi culus oo ah caddeeyn lacag madow.
Sidoo kale waxaa laba sannadood iyo afar bilood oo xabsi ah lagu xukumey laba qof, halka mid saddexaadna lagu ridey xukun ah laba sannadood iyo laba bilood oo xarig ah. Kuwaasina oo lagu eedeeyey waxyaabo ey ka mid yihiin dembi culus oo la xiriira qarinta dembiile.
”Mashruuca in la furo bangi islaami ah oo u baahan maal gelin gaareeysa 100-150 malyan oo koron ayaa socon waayey kolkii ey bangiyada dalku ka gaabsadeen iney gacan ka geeystaan sidii dhaqaale laga keeni lahaa bariga dhexe Sweden loo soo gaarsiin lahaa. Waxayna ahayd tallaabo khaldan inuu urur samafal oo ku howlgala iskuullo oo sidiisaba gacan ku yeesho mashruuc bangi, iyadoona dhaqaalihii laga saaray uu waxyeeleeyey ururka, sida ay sheegtay garsoorihii maxkamadda Caroline Hedvall, oo go’aanka maxkamadda ka faallootay.